Ma Dhabbaa in Soomaaliya ay Guumaysi Ku jirto?
By ibrahim Aden shire August 24, 2017
waxaa maalinti shalay ahayd (24/08/2017) lagu daabacay qaar ka mid ah shabagadaha wararka ee soomaalida warbixin ciwaan looga dhigay Soomaaliya oo ku jirto guumaysi nooc kala ah. qoraha warbixinta ayaa tilmaamay in lix qaybood oo muhiim ah soomaaliya laga guumaysto kuwasoo kala ah: Ciidanka, dhaqaalaha, Diinta, Ganacsiga, Waxbarashada iyo Maskaxda. Hadaba ma jiraan arimahaan hadiise ay jiraan ma lagu tilmaami karaa guumaysi?
Si guud waxaan dhihi karaa dhamaan inta uu qoruhu sheegay waan jiraan. waa jirtaa in Soomaaliya aysan lahayn ciidan sugi karo ammaankeeda, ilaalin karo xudduudaheeda difaacina karo haddii la soo weeraro. Sidoo kale waa jirtaa in dowladda iyo hay'adaheedaba ay biilaan dalal shisheeyo. sidoo kale waa jirtaa in intii dalku burbursanaa waxbarashadu ku tiirsanayd dalal shisheeye manhajka la dhigayayna ay ahaayeen kuwa laga soo dheegtay ama sidooda looga soo qaatay dalal shisheeye. Hasa ahaatee taasi kama dhigno guumaysi ee waa arimo ay keeneen duruufo markaas taagna heerar kala duwana soo maray.
Qoruhu wuxuu sheegay in wasiir uu soo jeediyay in la mabnuuco soo dajinta alaabaha laga heli karo dalka si loo dhiiri galiyo wax soo saarka dalka. Arintaan waa mid la yaab leh. haddi ay wasiir ka soo yeertayna waa mid waalli ah waayo wax ha mamnuuco iyo wax ha la ciqaabo mooyee maxaa inoo diiday inaan si kale u fakarno? dowladdu awood ay ku meel mariso sharciga ay wax ku mamnuucday ma leedahay? dhib intee la eg ayaa soo gaari maanta dadka dan yarta ah haddii la mamnuuco alaabaha ay iibsan jireen ee dibada laga keeni jiray? Cashar miyaanan ka baranayn dhibkii uu keenay qaadki Siyaad Barre AUN oo dowladdaan ka xoog badnaa uu mamnuucay? Maxaa ku dhacay dalka Zimbabwe marki wadanka laga eryay dadki caddaanka ahaa ee beeraha lahaa iyadoo marmarsiyo laga dhigtay dadka wadanka leh ayaa beeraha isticmaali? sanadi 2000 Zimbabwe cuntada ka baxdo ayaa dibada loo dhoofin jiray, 2 sano gudahood maalinti caddaanka beeraha lahaa la eryay Zimbabwe iyadaa cunto cawimaad ah loo soo dirayay. Intaas ayaa u yar dhibaatada ay leedahaygo'aamada laab lakaca ah ee dag-dagga lagu qaato.